VanaChiremba neVakoti Voramba Vachisiya Mabasa muNyika Vachinoshanda Kunze
Kurume 14, 2022
Vanachiremba vachiramwa mabasa
Zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvekare revakoti navanachiremba varikubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende.
Asi vakoti navanachiremba ava vanoti bazi rezvehutano rave kuyedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificate yakakosha kuti vaende kunoshanda kunze.
Kunyangwe Zimbabwe ichidzidzisa vakoti navanachiremba vakawanda gore roga roga, vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezvehutano. Makirinika mazhinji emumadhora akavharwawo nekushaya mari.
Vakoti navanachiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain, Ireland, America neAustralia uko vanopihwa mari iri nani.
Panopedza munhu zvidzidzo, anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopihwa nesangano reNurses Council of Zimbabwe asi ikozvino zvave kuitwa nebazi rezvehutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anonoke kubuda sematauriro aMuzvare Tendai Chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvehutano kuti chii chiri kupa kuti vanhu vanonoke kupihwa magwaro aya.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vanamukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association, VaEnoch Dongo, vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Nhengo yeparamende inomirira Chinhoyi uye vari chiremba. Doctor Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezvehutano, vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Mumashoko kune vakoti iyo iri mumaoko eStudio 7, Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga muna Ndira, munhu anenge achida magwaro aya anofanira kudhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti 300 USD.
Vakoti vambenge vachibhadhara mari inozvika madhora zviuru gumi nemana kana kuti 14000 mumadhora emunyika.
Vakoti vemunyika vanotambiriswa mari yema Zimdollars 33 000 kana kuti US$132, inova mari yavanoti haikwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Vanamukoti vanoshandira nyika dzinoti Namibia neSouth Africa, varikutambiriswa mari inodarika chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti mari iri pakati peUS$ 1 477 ne US$ 1 887 pamwedzi.
Kunyika dzakabudirira dzinenge United Kingdom, iyo iripamberi pekukwenzva vana mukoti vemunyika, vanotambirisa mari inodarika zviuru zvitatu , USD3 000 pamwedzi zvokuti vanamukoti vakawanda vari kushuvira kuenda ikoko asi mapepa e verification aya ndiwo ange ave kunonotsa nzendo dzavo .
Ongororo yakaitwa neHealth Services Board inoti vashandi mubazi rezvehutano zviuru zviviri nemazana maviri vakasiya basa gore rapera uye pavashandi ava pane vakoti mazana mapfumbamwe.
Zvichibatanidzwa nedambudziko reCovid-19, zvave kureva kuti vakoti vashoma vasara muzvipatara vave kushanda kwenguva yakareba.
Izvi zviri kukanganisa hutano hwevarapwi zvakanyanya sezvo pasina anenge achivatarisa. Zvipatara hazvina mushonga uye vakoti navanachiremba vanoti hamuna zvikwanisiro zvinova zviri kuvawodza moyo.
Nyika dzakawanda dziri kuvhiringidzwa nechirwere cheCovid-19 dzave kutora vakoti navanachiremba ava. Bazi rezvehutano muna 2019 rakati nyika yainge iina vanachiremba zviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 pavanhu vari munyika vaidarika mamiriyoni gumi nemashanu.